XOG:- Sababta hoos loogu dhigay musharka Shaqaalihii hore ee Gobolka Banaadir ? iyo Jaangooynta Mushaaraadka Cusub .(Aqriso) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
XOG:- Sababta hoos loogu dhigay musharka Shaqaalihii hore ee Gobolka Banaadir ? iyo Jaangooynta Mushaaraadka Cusub .(Aqriso)
Ahmed weheliye Gaashaan 26 January 2019 26 January 2019
Qoraal kasoo baxay Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Yariisow ayaa jaan-goyn cusub lagu sameeyay Mushaaraadka ay qaataan Madaxda ugu sareysa maamulka gobolka Banaadir ilaa shaqaalaha ugu hooseeya.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sheegay in dhaqaalo daro baahsan lasoo daristay maamulka gobolka Banaadir, waxa uuna mushaar dhimis ku sameeyay dhamaan Madaxda maamulka gobolka iyo shaqaalaha kala duwan ee Dowlada Hoose.
Sida ku cad qoraalka kasoo baxay Gudoomiyaha gobolka Waxaa la dhimay mushaaraad badan oo qaadan jireen gudoomiyaasha Degmooyinka gobolka Banaadir, Lataliyaal, kaaliyaal , Wakiilo iyo qaar kale oo badan oo kamid ah shaqaalaha gobolka.
Gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir ayaa markii hore qaadan jiray lacag gaareysa 4-kun oo Dollar waxaana hada laga dhigay 2-kun oo dollar, waxaa sidoo kale shaqaale kasta oo gobolka katirsan laga dhimay lacagtii hore uu qaadan jiray.
Duqa Muqdisho ayaa dhaqaalaha ugu badan ee Mushaar ahaan waxa uu u siiyaa Lataliyaal magac u yaal ah oo u badan Qurbo joog, kuwaa oon wax shaqo ah u qaban gobolka , waxaana dadkan mushaarka ku qaataan qaab qabiil iyo saaxiibtinimo.
Gudoomiyaasha Dhalinyarada degmooyinka gobolka Banaadir oo shaqo aad u badan qabta ayaa la siiyaa lacag dhan 150 Dollar halka dad aan hal maalin xitaa shaqo u qaban maamulka gobolka ay qaataan lacag ka badan 3-kun ilaa 4-kun oo doolar.
Lataliyaasha saaxiibada dhaw la ah Gudoomiyaha gobolka Banaadir oo tix galin gaar ah loo sameeyay ayaa qaata lacag u dhaxeysa 4-kun dollar ilaa 2-kun oo dollar, waxaana xusid mudan in lataliyaasha aysan tiro laheyn ayna yihiin kuwa badan oo la iska qoray.
Xubno katirsan maamulka gobolka Banaadir oon xiriiro la sameenayay ayaa noo sheegay in aysan jirin dhaqaalo xumo gaar ah oo maamulka lasoo darsay balse Gudoomiyaha gobolka markii uu xilka qabtay qoray shaqaalo badan iyo lataliyaal aan xad laheyn kuwaa oo dhaqaalo badan ku baxdo uuna doonayo in lacagta ay qaataan looga dhimo shaqaalihii hore.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa la sheegaa in uu ka jiro musuq maasuq aad u baahsan, waxaana dhaqaalaha gobolka Banaadir soo gala ku baxaan sidii loogu tala galay si ka baxsan taa oo keentay isku dhax yaac dhinaca dhaqaalaha ah.
Guddiga Maaliyadda ayaa dhawaan qoraal kasoo baxay waxaa lagu sheegay in musuq maasuq baahsan uu ka jiro maamulka gobolka Banaadir, waxa ayna guddiga sheegeen in dhaqaalo badan oo baxay ku baxeen si qaldan oon sharci aheyn.
somalia president in Garowe For Inauguration of newly elected Puntland President